Mahazo ny Mahafantatra Ny Sambo. Tsy misy, ho zava-dehibe. Manao izany. — I EVA: Valkyrie — Fifandonana
Toy ny rookie Valkyrie mpanamory fiaramanidina, dia mila tonga saina ny sambo dia tsy fotsiny ny mafana hametraka ny toerana kodiarana. fa ny faharoa hoditra. Maka ny fotoana mba handinika izany ao an-tsipiriany sy araka ny tokony hiomana ho amin’ny hoavy manao ahoana, na aiza ianao dia ho may. Ary ao ny raharaha mikasika an’i EVA hoe: Valkyrie ianao angamba handoro, avy eo dia mandry, dia ho faty. Avy eo dia telo indray.
Tsy ny tsara indrindra vokatra azo. Vao mainka ianao ho fantatrao momba ny sambo ny instrumentation sy ny tahirin-kevitra izany foana ny mamelona anao, ny kokoa ianao mba ho velona. Izany dia ny fiainana ny fanohanana tarika sy ny zavatra rehetra izay mampisaraka anao avy amin’ny mangatsiaka, unforgiving banga ny toerana lalina. Izany dia ahitana avokoa ny fanaka sy widgets tokony hanao ny asa maha-Valkyrie mpanamory fiaramanidina, ka aoka handray ny mijery ny manodidina. Fa ny mitsangana barany ambony ankavia. Izany dia mampiseho ny tsy fivadihan’ireo ny hull, na ny fiadiana. Fa ny andalana farany ny fiarovana ka raha izany hijerena mahazo ambany, tonga ny fotoana mba mafana-tongotra azy avy any, ary afeno avy, na miantso amin’ny sasany ny fanasitranana avy amin’ny fanohanana ny asa tanana. Ary ny mitsangana barany ambony havanana dia ny ampinga sata. Ny ampinga dia ny andalana voalohany ny fiarovana. Araka ny vaovao hamaha ny sambo sy ny sambo fampianarana, ho tsikaritrao ny fomba maro samy hafa izy ireo eo amin’ny lafiny fiarovana ary fiadiana. Mavesatra kilasy sambo, ohatra, dia tsara mifono vy noho izany dia afaka maka ny mety mipetraka any ka hahavonto ny fahavalo fitaovam-piadiana.
Araho maso ny gauges
Izany dia mora raisina kely hologram manome anao haingana hevitra hita maso izay dia manodidina anao. Manga marika dia friendlies, orange marika ireo fahavalony, mavo marika ireo balafomanga sy ny sisa. Zavatra ary, crucially, fahavalo ao anatin’ny radara ny hiseho toy ny arrowheads milaza ny tari-dalana momba izay zavatra. Koa raha ny fahavalo no lasibatra ianao na dia ao ny cone faritra aoriana ianao, dia ho lasa malaza kokoa eo amin’ny radar. Balafomanga na Oviana na fotoana iray, ny ady faritra dia ho crisscrossed amin’ny maro ny balafomanga. Afa-tsy ny balafomanga mikendry ianao dia ho hita eo ny HOUD, nitondra fanazavana ny korontana. Friendlies ankehitriny miseho eo amin’ny radar eo ambanin’ny toe-javatra sasany. Raha handefa com alert mba hanasitrana hanampy na vondrona, ianao mahita azy ireo (hita eto amin’ny manga). Raha toa ianao manidina ny sambo miaraka amin ‘ ny fanasitranana ny fahaiza-manao rehetra friendlies dia ho hita amin’ny fotoana rehetra. Ny radar dia fitaovana lehibe, fa tsy ho tonga ihany koa mizaka izany. Rehefa afaka rehetra, izany no VR — amin’ny fomba rehetra indray mipi-maso dia nidina tao ny radar indray mandeha raha mba hahita ny fomba atao dia ny mahazo avy any, nefa ianao te-hifantoka amin’ny ady vaika teo ivelan’ny ny cockpit amin’ny ankapobeny. Hojerentsika ny mavo mitombo miandalana, trano fisotroana eo ambany havia sy ny havanana amin’ny cockpit. Ireo tondro roa dia mifamatotra tanteraka mifandray. Ny capacitor eo ankavia dia mampiseho aminao ny fomba be voatahiry hery ianao, raha ny velocity famantarana eo ankavanana dia mampiseho ny fomba haingana ny handeha ianao. Ny kokoa ianao hampitomboana ny manodidina, ny kokoa ianao deplete ny capacitor. Manoloana izany, dia tsara kokoa ny mampiasa ny hampitombo ao fohy ranolava fa tsy foana lavinareo ny manodidina. Raha ny tena izy, izany no tanteraka ny toro-hevitra ianao hahazo avy niaina mpanamory noho ny fampiasana fohy ranolava ny tosika ampiarahina amin’ny kisendrasendra ny fanovana ny lalana no fomba mahomby indrindra dia ny hijanona soa aman-tsara rehefa nanenjika. Ity takelaka maneho ny sisa tsy mijery foana ny marina toy izany no ao amin’ity sary ity, araka ny vaovao misy dia miova araka ny toe-javatra. Eto izany dia mampiseho an-toerana telo ny fanaraha-maso ny hevitra, ny isan’ny clones sisa tavela isaky ny ekipa, ary ny fotoana sisa tavela ao amin’ny lalao. Fanaraha-maso Isa Ao amin’ny fanaraha-maso ny lalao, ity fivoriana ity ihany koa dia mampiseho anao ny toerana misy ny fanaraha-maso ny hevitra ny ekipa no mba hisambotra. Raha ny hevitra dia ho fotsy ny lokony, dia tsy nisy fanaraha-maso. Rehefa drôna dia naniraka, dia ho hitanao ny faribolana manodidina ny famantarana tsikelikely hameno ny lokony ho midika izany fa ny fanaraha-maso ny fotoana dia ao amin’ny dingan’ny ho voasambotra. Ny loko ny fanaraha-maso ny hevitra amantarana dia hanova tanteraka rehefa fotoana izay no voasambotra, miampy kely kisary dia toa maneho izay ekipa manana nahafaka azy. Raha hijery ivelan’ny varavarankely, ianao dia afaka mahita fa misy mitsinkafona fanaraha-maso ny fotoana tondro ka raha mahita manokana kendrena eo ambany fanafihana, dia afaka hazakazaka nandritra tsy mba handray avy ny fahavalo drôna sy ny hananana indray izany. Mitondra Fanafihana Sarintany Nandritra Mitondra fanafihana fomba, indray mandeha ny fanaraha-maso ny hevitra efa antoka sy ny ampinga dia midina, ny fanaraha-maso ny fotoana sary dia manjavona mba ho soloina amin’ny alalan’ny virtoaly sary ny mitondra. Ho tsikaritrareo fa izany no marika amin’ny teboka fotsy. Ireo dia ny sisa tavela hihena nodes — izany dia tena ilaina satria io no manamarika ny toerana marina, izany hoe tsy maintsy mitandrina skoto manerana ny mahita azy ireo. Clone Boaloboky Ny manga bar dia mampiseho anao ny toerana amin’izao fotoana izao ny clone vat na, raha lazaina amin’ny fomba hafa, ny habetsaky ny fiainantsika ny ekipa no sisa. Ny voasary bar dia ny ekipa mpifanandrina ny sisa clones. Fotsiny eto ambany fa ny famantarana ny fotoana sisa. Ao amin’ny ekipa fahafatesana mitovy, raha toa ny ady mifarana sy efa vitsy sisa clones noho ny fahavalo, ianao very. Noho izany raha ireo tondro dia mampiseho anao amin’ny tombon-dahiny, tonga ny fotoana mba ambony ny lalao kely. Mitondra Fahasalamana Manokana ny multi-mpilalao Mitondra Fanafihana fomba, ity famantarana efa maro ny asa, ny iray amin’ireo izay mampiseho ny mitondra ny sisa tavela ara-pahasalamana araka ny hita eto. Com Fanairana hanampy anao mba handefa haingana ny hafatra ho any amin’ny sisa amin’ny ekipa. Manosika teo amin’ny F-pad mba hampakatra ny fanairana sakafo, mampiasa ny zo hanaraka ny mifidy ny naniry ny hafatra, dia fanafahana an-D-pad mba handefasana ny hafatra. Koa raha nandre ny fanairana, ny lisitry ny vao manaitra ihany koa dia toa tahaka ny andinin-teny momba ny zo amin’ny cockpit. Ankehitriny ianao dia tsara kokoa ny manodidina azy rehetra, fa ny sisa dia ho anao ny buckle ny, hahazoana ny lalao miatrika eo sy mampiseho ny ntaolo izay ny lehibeny
← Maimaim-poana Mivantana Lahatsary Firesahana amin'ny sy ny lahatsary-antso. Izao Tontolo Izao Ny Lahatsary Mampiaraka